Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Vail Resorts hahazo ny Resort Top
Vail Resorts, Inc. androany dia nanambara fa nanao fifanarahana marimaritra iraisana izy hahazoana 100 isan-jaton'ny tahiry miavaka amin'ny Tampon'ny Resorts, Inc. amin'ny vidin'ny fividianana $ 11.00 isaky ny anjara, miankina amin'ny fepetra sasany, ao anatin'izany ny famerenana ny lalàna mifehy sy ny fankatoavan'ny tompon-tany an'i Peak Resorts.
Amin'ny alàlan'ny fahazoana, Vail Resorts dia hanampy faritra ski 17 US amin'ny tambajotran'ny trano fandraisam-bahiny kilasy eran-tany. Any akaikin'ny faritra an-drenivohitra lehibe, anisan'izany i New York, Boston, Washington, DC, Baltimore, Philadelphia, Cleveland, Columbus, St. Louis, Kansas City ary Louisville, ireo resort dia ahitana:
• Mount Snow ao Vermont
• Hunter Mountain any New York
• Attitash Mountain Resort, Wildcat Mountain ary Crotched Mountain any New Hampshire
• Liberty Mountain Resort, Roundtop Mountain Resort, Whitetail Resort, Jack Frost ary Big Boulder any Pennsylvania
• Alpine Valley, Boston Mills, Brandywine ary Mad River Mountain any Ohio
• Hidden Valley sy Snow Creek any Missouri
• Paoli Peaks any Indiana
"Faly izahay fa afaka manararaotra mampiditra tambajotra ski toy izany ho an'ny orinasanay," hoy i Rob Katz, filoha sady tale jeneralin'ny Vail Resorts. “Ny faritra ski an'i Peak Resorts any Avaratra Atsinanana dia famenon-javatra tonga lafatra amin'ny trano fandraisam-bahiny misy anay ary miaraka dia hanome tolotra tena mandresy lahatra ho an'ireo vahininay any New York sy Boston. Amin'ity fahazoana ity dia afaka manao fifandraisana matanjaka kokoa amin'ireo vahiny any amin'ny tanàna be krizy any Mid-Atlantika sy Midwest koa isika ary manangana ny fahombiazana efa hitantsika tamin'ny paikadinay tany Chicago, Minneapolis ary Detroit. Ny fahazoana dia maneho tanteraka ny filozofianay momba ny Epic ho an'ny olona rehetra, izay mahatonga ny fitsangantsanganana an-tsambo sy ny fitsangatsanganana azon'ny vahiny manerana an'i Etazonia sy eran'izao tontolo izao. ”
"Ireo faritra ski ao anatin'ny portfolio an'ny Peak Resorts dia maneho ny fanahin'ny fanatanjahantena ary koa ny iraka ampanaovin'ny orinasanay ny fanomezana traikefa amin'ny androm-piainana ho an'ireo vahiny," hoy hatrany i Katz. "Faly izahay mandray ireo resort sy ny mpiasan'izy ireo ao amin'ny fianakaviana Vail Resorts ary hampiasa vola amin'ny fahombiazan'izy ireo."
"Vail Resorts dia manana rakitsoratra malaza amin'ny fankalazana ny miavaka mombamomba ny toeram-pialan-tsasatra, raha toa ka manambola hatrany amin'ny traikefa ho an'ny vahiny sy ny mpiasa. Noho io antony io dia matoky izahay fa ny toeram-pialan-tsasatra sy ny mpiasanay dia hitohy hiroborobo ao anatin'ny tambajotra Vail Resorts, "hoy i Timothy Boyd, filoha sady tale jeneralin'ny Peak Resorts. “Tena reharehanay ny firaketana an-tsokosoko tato anatin'ny roapolo taona lasa teo amin'ny fananganana ny sakany, ny kalitao ary ny fahazoana miditra amin'ireo trano fandraisam-bahiny. Faly izahay fa afaka miditra amin'ireo trano fandraisam-bahiny malaza eran-tany ireo vahininay. ”
Rehefa mikatona ny fifampiraharahana, ny Pass Epic Pass 2019-20, Pass Epic Local ary ny Epic Pass an'ny miaramila dia hisy fidirana tsy voafetra sy tsy voafetra mankany amin'ireo faritra ski 17 Peak Resorts. Ireo vahiny manana Epic Day Pass dia afaka miditra amin'ireo faritra ski vaovao ihany koa ho toy ny ampahan'ny totalin'ny andro novidiana. Ho an'ny vanim-potoana 2019-20, Vail Resorts dia hanome voninahitra sy hanohy ny fivarotana ny vokatra Pass Peak rehetra, ary ny tompon'ny pass Resorts dia hanana safidy hanatsara ny Epic Pass na Epic Local Pass, aorian'ny fanakatonana ny fifanakalozana.